Isagu carshigiisuu ku fadhiyaa dhulka dushiisa, Oo kuwa degganuna waa sida ayaxa oo kale. Isagu samaduu u fidiyaa sida daah oo kale, Oo wuxuu u kala bixiyaa sida teendho oo kale. wuxuu siinayaa ...
Inteena ugu badan ayaa akhrinaysay Kitaabka Quduuska ah wakhti dheer, badiyaa sannado badan. Way fiicantahay inaad akhrido aayadaha caanka ah isla markaana naftaada ku duub sida inay yihiin buste diiran. Waxay ku dhici kartaa in aqoonteena ay keento in waxyaabo aan iska indhatirno. Haddii aan u aqrino indhahayaga furan oo aragti cusub, Ruuxa Quduuska ah wuxuu naga caawin karaa inaan aqoonsanno waxyaabo badan oo suurtagal ah oo aan xasuusano waxyaabo aan illownay.
Markii aan akhriyo Falimaha Rasuullada mar labaad, waxaan soo maray Cutubka 13aad, ...